Halley Johnson Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Halley Johnson
Halley Johnson isoftware freelance munyori uye mupepeti. Ndiani parizvino anoshandirwa na Pakutanga.com. Ane mashoma akadhindwa zvidimbu pasi pemanyepo. Ivo vanowanzo kuve ezasi-avhareji nhetembo. Halley parizvino ari mubishi kunyora yake yekutanga yakazara-kureba novel (ichave iri pasi pezita rake chairo). Kubudirira kwake kukuru kuve amai vakanaka kunguruve yake uye mwanasikana ari pakati pevabereki vake.
Svondo, Kukadzi 9, 2020 Svondo, Kukadzi 9, 2020 Halley Johnson
Vhidhiyo kushambadzira yave imwe yedzakanakisa nzira dzekutengesa mumakore gumi apfuura. Nemitengo yemidziyo uye zvirongwa zvekugadzirisa zvichidonha sezvavanenge zvichinyanya kushandiswa, zvawanawo zvakawanda zvinodhura. Kugadzirwa kwevhidhiyo kunogona kuve kunonyengera kuti uwane chaiko nguva dzekutanga dzaunoyedza. Kutsvaga iyo chaiyo nzira yekumisikidza vhidhiyo yekushambadzira kwakaoma kupfuura zvakajairika kugadzirisa kuri. Unofanira kuisa